Kuziva sei kuwanda kwematweaks atakaisa | IPhone nhau
Pane dzakawanda nguva, kunyanya kana zviri zvitsva, isu tinowanzo gadza chero chero tweak yatinoona kana mumwe munhu watinoziva achikurudzira. Nekufamba kwenguva, chinonyanya kuitika ndechekuti yedu iPhone inotanga kushanda zvishoma kana kuti bhatiri rinoshandiswa rakakwira kana pamwe mamwe ma tweaks anodhumhana nevamwe uye yedu iPhone inotanga kuita zvisinganzwisisike tisingazive inova iyo tweak iri mubvunzo iri kutipa matambudziko . Pane ino chiitiko, yakanakisa nzira yekuvandudza mashandiro eedu iPhone kana iPad kutarisa kuti ndeapi ma tweaks atakaisa kuyedza kuchenesa uye kuti mudziyo wedu unoramba uchishanda sezvawakaita pakutanga.
Kana tichida kuziva huwandu hwema tweks iyo inokurumidza nzira yekuverenga ese atakaisa imwe neumwe. Dambudziko rinomuka kana nhamba yetweaks yakanyanya uye izvi zvinotora nguva yakareba kupfuura zvakajairwa. Apa ndipo patinofunga panofanira kuve nechimwe chikumbiro icho chinoita basa racho kwatiri.
Apa ndipo panowanikwa Tweak Count 2. Iyi tweak inowanikwa paBigBoss repo zvachose mahara Wedzera ruzivo irworwo kumusoro kurudyi kwechikamu chakaiswa. Asi pamusoro pezvo, inotipawo iyo ruzivo pazasi pechinyorwa, kana tweak yekupedzisira yeiyo runyorwa rweavo vatakaisa yaratidzwa
Neruzivo irworwo tinogona kuwana zano nekatarisiro kekuti dambudziko ringave rei. Iyo nhamba yakanyanya kukwirira, pamwe isu tinofanirwa kufunga zvakare kubvisa zvimwe zvatisingashandise. Chokwadi une anopfuura anopfuura maviri uye maviri ma tweaks akaisirwa ayo iwe wakangoshandisa iro rekutanga zuva kuyedza mashandiro aro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Kuziva sei kuwanda kwematweaks atakaisa
Natsiridza yako yekurovedza muviri nePedometer ++ yeApple Watch